Ukuhlaziywa Kwemakethe | Ibhulogi ye-FXCC
Isiqondisi "isiko se-advanced-iframe" asikwazanga ukudalwa ngokuhambisana nefolda ye-plugin ye-iframe ethuthukile. Amafayela okwezifiso agcinwa kule directory ngoba i-Wordpress isusa ifolda ye-plugin evamile ngesikhathi sokubuyekeza. Sicela udale ifolda ngesandla.
Ifayela elithi "advanced-iframe / js / ai_external.js" alikwazi ukulondolozwa. Sicela uhlole izimvume zefolda ye-js futhi ugcine futhi izilungiselelo. Leli fayela liyadingeka ukuze kwenziwe umsebenzi wangaphandle! Uma ungasebenzisi i-workaround yangaphandle sicela udale ifayela elingenalutho ngegama elithi ai_external.js kwifolda ye-js ye-plugin.